Mpanoratra Asongadina: Mac-Jordan Holdbrookes-Degadjor · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Septambra 2018 15:09 GMT
Tamin'ny volana Aogositra 2009, natao tao Accra, Ghana ny Maker Faire Africa ary nahasarika mpanangana manerana an'izao tontolo izao izay te-hampiseho ny famoronany farany. Nandray anjara tamin'ny fampiroboroboana sy fanoratana momba ny fety ihany koa ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonin'ny aterineto ao an-toerana, ny sasany aza nanome ny fotoanan'izy ireo mba hanampy amin'ny hetsika. Bilaogera iray, Mac-Jordan Holdbrookes-Degadjor no iray amin'ireo Ghaneana nanampy, ary nanjary loharanom-baovao tena sarobidy izy noho ny fahalalany isan-karazany momba ny tanindrazany.
Sarin'ny Mac-Jordan nalain'i Georgia Popplewell.
Nitarika fiarahamiasa maro ireo fifandraisana ireo, toy ny fanombohan'ny blaoginy tao amin'ny sehatra Maneno ary lasa mpanoratra ho an'ny Global Voices izay nahalasa azy ho mpanoratra momba ny tontolon'ny bilaogy Ghaneana.
Mampahafantatra an'i Mac-Jordan, izay miresaka momba ny bilaoginy Accra Conscious Forever sy Accraboy, ary koa ny fandraisany anjara mavitrika ao amin'ny Twitter ity horonantsary nalaina tamin'ny volana Aogositra 2009 ity